Ikhtiyaarada Shixnad | Farmashiyaha RXS
Waddanka isku xiran ee Mareykanka, khidmaddayada maraakiibta ee caadiga ahi waa $ 19.99 dhammaan amarrada $ 199.99 iyo wax ka yar. Amarada $ 200.00 iyo ka badan, oo leh cabbirka caadiga ah iyo alaabada miisaanka caadiga ah, waxay leeyihiin maraakiib bilaash ah.
Khidmadaheena maraakiibta caadiga ahi waxay khuseeyaan oo keliya alaabooyinka cabbirka caadiga ah, miisaanka caadiga ah, iyo walxaha aan halista lahayn. Alaabada halista ah waxay leeyihiin maraakiib gaar ah oo loo xilsaaray ama waa la xisaabiyaa kadib amarka iyadoo lagu saleynayo khidmadda shirkadda maraakiibta. Alaabooyinka waaweyn, culus, ama u baahan rar xamuul ayaa laga reebay dalabkeena maraakiibta bilaashka ah. Alaabooyinka waaweyn, culus, ama u baahan rarka xamuulka waa: 1) oo loogu talagalay meel ka baxsan khidmadaheena maraakiibta caadiga ah oo leh khidmad xamuul oo gaar ah oo loo qoondeeyay taas oo ku tusaysa gaadhiga iibsiga ama 2) waxaa loo qoondeeyay alaab u baahan rar xamuul . Khidmadaha xamuulka xamuulka waxaa xisaabiya rarka xamuulka waana la gudbiyaa iyada oo aan wax koror ah jirin. Maraakiibta xamuulka sida caadiga ah waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo dhowr doorsoomeyaal sida culeyska, cabirka, habka gudbinta, iyo goobta dirista.
Maraakiibta sida caadiga ah u raaceysa Mareykanka ayaa waxaa bixin doona Fed Ex Ground ama UPS. Gobollada iyo taritoriyada dheeraadka ah ee Mareykanka, waxaan leenahay khidmadda maraakiibta ee caadiga ah $ 75.00. Khidmadda dhoofintu way ka sarrayn kartaa ama ka yaraan kartaa iyadoo ku saleysan cabirka iyo culeyska amarka.
Waxaan u rarnaa alaabada Isniinta - Jimcaha 24 saacadood gudahood ee bixinta lacagta la bixiyay alaabta la dalbaday ayaa taal. Amarada lama socodsiinayo ama lama soo dirayo Sabtida, Axadda ama ciidaha waaweyn ee Mareykanka, marka laga reebo habeyn hore. Dammaanad kama qaadi karno goorta dalab yimaado. Tixgeli waqtiga rarka sida qiyaas ahaan.
Si loo yareeyo kharashka dhoofinta iyo in alaab loogu helo macaamiisha sida ugu dhakhsaha badan, waxaan ka rarnaa bakhaaro badan oo ku yaal hareeraha Mareykanka. Qaar badan oo ka mid ah bakhaarradeena, shirkadaha saadka, iyo soo saarayaasha ayaa adeegsada shixnado gaar ah sida FedEx sababta oo ah adeegga ay ka bixiyaan aaggooda. Waxaan ka codsaneynaa inay adeegsadaan qaabkooda ugu wanaagsan ee amarka u sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. Haddii qaabkooda ay doorteen uu yahay UPS adiguna aad dooratay FedEx waxaan bixin doonnaa wixii faraq ah ee xagga kharashka ah laakiin lacag kugu soo dallacayo
Waxaan xaq u leenahay inaan adeegsanno rarka kale sida boostada, dirista maxalliga ah, iwm. Haddii aan u aragno inay ku habboon tahay amarkaaga. Si kastaba ha noqotee, wax lacag ah lagaa qaadi maayo adiga oo aan marka hore helin qiyaas iyo codsi inaad ku oggolaato eedeynta. Waxaan la kulanay xaalado yar oo dhif ah oo ay jirtay hal markab oo kaliya oo la keeni karo aaggaas markaasna waxaan adeegsanay xamuulkaas. Haddii aad haysato xaalad gaar ah fadlan ku muuji sida qaybta Faallooyinka Macaamiisha waxaanan ku dadaalaynaa sida ugu fiican ee aan u sharfaynno codsigaaga.
Maraakiibta caalamiga ah, fadlan lagugula taliyo in Khidmadaha Dullaaliinta, Waajibaadka Kastamka, iyo / ama Canshuuraha aan lagu darin qiimaha wax iibsiga ee ku qoran. Waxaan had iyo jeer raadin doonaa ogolaanshahaaga la muujiyey oo leh sharaxaad ku saabsan kharashyo dheeri ah ka hor intaadan u adeegsan iibsashadaada. Fadlan waxaa lagugula talinayaa in haddii aad ogaato khalad kahor intaadan helin shay la iibsaday ama rasiidka aad go'aansato in shay la dalbaday uu khaldan yahay ama uusan ahayn waxa aad dooneysay fadlan si toos ah noogu soo wargeli sida ugu dhaqsaha badan.